Çanakkale 1915 Bridge Kuzova Service muna Kurume 2022 | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara17 CanakkaleÇanakkale 1915 Bridge Kuzova Service muna Kurume 2022
16 / 05 / 2020 17 Canakkale, GENERAL, hyperlinks, HIGHWAY, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY, VIDEOS
canakkale Bridge richapinda basa mukufamba
Mutungamiri Recep Tayyip Erdoğan vakapinda Çanakkale 1915 Bridge Tower Kupedzisa Ceremony nemusangano wevhidhiyo pamwe negurukota rezvekutakura nekuvakwa kwezvinhu Adil Karaismailoğlu.
Erdogan naKaraismailoğlu vakataura pamhemberero yekupedzwa kweimwe yedura rebhiriji.
Zvinokosha zvemashoko akataurwa pamhemberero ndeizvi:
Tinovimba tichachengeta vimbiso yedu yekuchengeta iyi bhiriji muna Kurume 2022, tinozovhura basa kune ese eTurkey
Iyo 2023 yepakati yepakati pebhiriji ndiyo muenzaniso yezvinangwa zvedu 2023.
Iko kuvakwa kwebhiriji kuenda kuDardanelles ndiko kurota kwemazana emakore .. Kunge zviroto zvakawanda munyika yedu, yaive kurumbidzwa kwedu kuzviita zvechokwadi.
Munyika iyo ichave yakagadzirwazve mune zvematongerwo enyika nehupfumi mushure megoronavirus, bhiri iri richava nzvimbo yakakosha kwazvo kwatiri.
Neichi chiitiko, mabhuruku ese ematura mana apera uye chikamu chakakosha mukuvakwa kwebhiriji ikozvino chasara kumashure.
Başakşehir City Hospital II. Musi waMay 21, pamwe neMutungamiriri weJapan, Mr. Abe, kuburikidza neidevonferencing.
Tichiri kuita izvi, chikamu chinotungamirwa neCHP chaigara chichiedza kudzivirira mabasa edu, kutikanganisa nenhema uye kuchera.
Kurwisa kweboka rekutsigira kwekuvimbika muVan chiitiko chekutyisidzira chinosanganisira nhengo dzeHDP. Zviitiko zveHDP zvinoitwa nenzira imwechete nenhengo dzeCHP. Maitiro acho akasiyana.
Gurukota rezvekutakura Adil Karaismailoğlu: Nhasi tinopupurira nhoroondo. Tiri kuunganidza nyika yekutanga shongwe dze1915 Çanakkale Bridge. Basa rezvikepe pakati peLapseki neGelibolu rinotora maawa 1.5 nebhiriji, nepo ichitora maawa 6. Kufambisa uye kutakura vafambi mumigwagwa yedu mikuru inowedzera zuva rega rega. Iri bhiriji richabatanidza Thrace neAegean Dunhu, uye richabatsira zvakanyanya kugona kwehupfumi. Mugwagwa wenyika uchapfupikiswa nemakumi mana emakiromita ane iyo 101-km yemakiromita. 40 miriyoni TL ichaponeswa gore rimwe nerimwe. Sezvo mune anopfuura zviuru zvekuvaka nzvimbo dzese munyika, isu tinoita maererano nemitemo yehutano kutanga uye yekuchengetedza basa kutanga.
1915 Çanakkale Bridge ichasvinudzwa pa 18 March 2022
1915 Çanakkale Bridge kuti izarurirwe pa 18 March 2022
1915 Çanakkale Bridge kuti ive World's Number One Bridge pa 2022
1915 Nheyo dzeEkanakkale Bridge dzichaiswa pana 18 March
1915 Çanakkale Bridge ndiyo ichave yakasimudza bhiriji yakareba kwazvo munyika
Nhasi munhoroondo: 18 March 2017 1915 Nheyo dzeCanakkale Bridge
Nhasi munhoroondo: 18 March 2017 1915 The Canakkale Bridge ...
Nhasi muNhoroondo: 18 Kurume 2017 1915 Çanakkale Bridge…
Çanakkale 1915 Bridge Ichapedzwa Kana
Çanakkale 1915 Bridge ichapfuura nenzira itsva
1915 Drilling Works Yakatangira Çanakkale Bridge
1915 yakagamuchira tsanangudzo yekambani ye24 yeKakanakkale Bridge
1915 Çanakkale Bridge Award Kukunda Company Nhasi
1915 Canakkale Bridge, Turks ihwohwo hune uchapupu hunopesvedzera
Mifananidzo ye1915 Çanakkale Bridge yakawanikwa kwekutanga
Metro Expedition Maawa muIstanbul ye4-Zuva Rekudzora
PTTBank EFT Sisitimu Yakabatanidzwa muCentral Bank System
1915 Çanakkale Bridge yakaiswa
Dr. Ersin Arıoğlu 1915 Çanakkale Bridge Presentation paIstanbul Bridge Conference…
1915 Çanakkale Bridge Building Inoenderera mberi Nokukurumidza Kwose
1915 Canakkale Bridge Yakagadzirwa